मुद्रास्फीति को सार। यसको कारण
मुद्रास्फीति कुनै पनि देश वृहदअर्थशास्त्र एउटा गम्भीर खतरा poses। यो घटना को विनाशकारी प्रभाव एक snowball जस्तै बढ्दै छ, र समय काउंटर लिन छैन भने, पतन अपरिहार्य छ। यस लेखमा हामी विस्तृत छलफल हुनेछ मुद्रास्फीति जस्तै यो नकारात्मक आर्थिक घटना को निम्न पक्षहरू: प्रकृति, गराउँछ, प्रकार।
शब्द ल्याटिन शब्द «inflatio», रूसी हालतमा "सुनिंनु" वा "सुनिंनु" मा अनुवाद जो देखि स्रोत एक घटना बताइरहेका। मुद्रास्फीति को धेरै सार लामो पर्याप्त र परिसंचरण मा नगद र गैर-नगद संख्या मा अत्यधिक र मुनासिप होइन वृद्धि कारण पैसा को तीव्र मूल्यह्रास छ भन्ने तथ्यलाई। त्यो उल्लेखनीय छ मौद्रिक ठूलो यो "माथि Blown" थिए र "सुनिनु"। आपूर्ति र माग एक असंतुलन - उहाँले एक अर्थव्यवस्था मा एक जबरदस्त असंतुलन गर्न "उभाडना" दिन्छ।
उत्सर्जन - मूल्य बढ्छ - पैसा को मूल्यह्रास - पैसा मुद्दा: छोटकरीमा वर्णन मुद्रास्फीति को प्रकृति यस्तो योजना हुन सक्छ। मूल्यहरु मा लगातार वृद्धि - कि, आफ्नो हानि कारण र फलस्वरूप, राज्य को coffers मा कागज पैसा असुरक्षित सुन रिजर्व को ठूलो मात्रा को रिलीज छ। बढ्दो मूल्यहरु परिसंचरण पैसा को कमी परिणामस्वरूप, ठूलो नगद व्यय आवश्यक र कागज पैसा को अर्को मुद्दा जारी। र आकार यो गांठ बढ्छ, एक गहिरो आर्थिक प्वाल मा राज्य कस।
यो कागज पैसा को परिसंचरण को मुद्रास्फीति विशेषता, वास्तविक सम्पत्ति (सुन वा चाँदी) को मामला मा, यो बस असम्भव छ भनेर उल्लेख गर्नुपर्छ। नै यो आर्थिक घटना आधुनिक अर्थतन्त्रको एक उत्पादन भनिन्छ गर्न सकिँदैन छ। ऐतिहासिक सीमितता को घटना फिर्ता जा उल्लेख पर्छ भनेर यी प्रक्रियाहरू अस्थिर अर्थतन्त्रको साधारण विशेषता: युद्ध, क्रांतियों, संकटहरूको, एक आर्थिक व्यवस्थापन प्रणाली अर्को गर्न संक्रमण, आदि को समयमा सार जो यी अवस्थामा पूर्ण स्पष्ट छ मुद्रास्फीति, कागज पैसा को जारी मार्फत सरकार व्यय को मौद्रिक वित्त को व्यवस्था उल्लङ्घनको कारण छ।
गलत तरिकाले मात्र मूल्य बढ्छ संग मुद्रास्फीति को सार पहिचान। यो सामाजिक-आर्थिक घटना धेरै जटिल छ। त्यहाँ जस्तै पैसा को एक मूल्यह्रास, हुँदा साथै, मुद्रास्फीति दबाब मूल्य बढ्छ बिना सम्भव छ , माल अभाव माल को राज्य को मूल्य फिक्सिंग को मामला मा। यस मामला मा, मुद्रा को मूल्य मा एक वास्तविक गिरावट छैन अवलोकन छ, तर पैसा आय गर्व, त्यसैले यसलाई अभाव वस्तुहरूको खरिद मा बचत खर्च गर्न सम्भव छैन। यस्तो "बाध्य" बचत मा वृद्धि राज्य योजना मूल्य बढ्छ मा निर्णय गरिएको छ जो को प्रभाव अन्तर्गत, "मुद्रास्फीति overhang" को गठन गर्न जान्छ। वस्तु-पैसा सम्बन्ध को एक असंतुलन, राज्य को अर्थव्यवस्था मुद्रास्फीति र यसको गम्भीर परिणाम को उद्भव अनुभव छ जब कि, छ।
त्यहाँ तीन प्रमुख हो मुद्रास्फीति को प्रकार, मूल्य वृद्धिको दर आधारमा:
मध्यम वा creeping (प्रति वर्ष 10% गर्न);
चाँडै चलनेवाला (20% प्रति वर्ष 200% गर्न);
hyperinflation (प्रति वर्ष% 200)।
मौद्रिक वृद्धि सुरुवात मुद्रास्फीति प्रक्रियाहरु को मुख्य कारण:
राजस्व र राज्य, अर्थात्, बजेट घाटा को व्यय को असंतुलन;
सामान को एक प्रकार र अन्य को कमी को अत्यधिक उत्पादन गर्न प्रमुख अत्यधिक लगानी,;
यस्तो हडताल, राजनीतिक nastabilnost आदि रूपमा सामाजिक र राजनीतिक असाधारण परिस्थितिमा।
मूल्य निर्धारण, कर, आर्थिक, र मौद्रिक रूपमा सार्वजनिक नीति को आचरण त्रुटिहरू।
यसरी, मुद्रास्फीति को सार, बहु-कारक को घटना, पैसा को मूल्यह्रास, बढ्दो मूल्य र पैसा आपूर्ति वृद्धि को कुनै पनि प्रक्रिया छ।
अर्थव्यवस्था मा एक मंदी के हो
व्यापार को नयाँ सर्तहरू लागि खोजी। व्यापार को प्रकार। आधुनिक अवस्थामा व्यापार
बेलारुस 'जीडीपी। वर्षौंदेखि परिवर्तन गतिशीलता
HPP रूस र यसको ऊर्जा क्षमता
Lagard क्रिस्टिन, को आईएमएफ। जीवनी, व्यक्तिगत जीवन
प्राचीन ग्रीक भगवान पाताल। परमेश्वर पाताल को प्रतीक
डिस्क व्यवस्थापन बाहिर आंकडा
कसरी हटाउने र कसरी सीएस जाओ मा Bots थप्न?
के घन्टी आफ्नो प्रेमिका को लागि वर्तमान टिप्न
छनौट, जो एक सस्तो घर निर्माण गर्न
एक तल भुक्तानी बिना धितो के राम्रो छ?
क्लाउड एड्रियन हेल्भेटियस: जीवनी, शैक्षिक विचार, फोटो
JSC "एस पि सी पावर": ग्राहक समीक्षा
Biozavivka परेलाहरु - आफ्नो नजर irresistible एक ग्यारेन्टी
तपाईंको आफ्नै हात Sander कसरी बनाउने: निर्देशन, वर्णन र सिफारिसहरू
पोर्सिलेन crowns: सङ्केत गर्छ र contraindications। चरणमा र बरतन crowns को विधिहरू